China RCL-2318 Fitaovana LED Linear Light nitaingina etsy ambany | lafo vidy
1. Izay fanontanianao dia hovaliana ao anatin'ny 12 ora.
2. Ireo solontena mpivarotra efa za-draharaha dia manome serivisy tsara ho an'ny fifandraisanay amin'ny orinasa.
3. Omeo zon'ny fizarana ho an'ny volavola tsy manam-paharoa sy ny maodely efa misy anay.
4. Arovy ny tsenanao, ny lisitry ny vokatra ary ny fampahalalana miafina momba ny orinasa.
1. Jiro amin'ny kabinetra, jiro fampiratiana, jiro ao an-dakozia, jiro ao amin'ny valizy, jiro aoriana na jiro fanampiny. ) Mety koa amin'ny jiro haingon-trano.
2. Jiro ankapobeny, toy ny birao, varotra, fampiratiana, gara, fivarotana lehibe, toeram-pivarotana, hopitaly, sekoly, trano fitehirizana, tranombakoka, ozinina sns.
3.Jiro ho an'ny fotoana manokana.
Ny fiainana lava sy azo itokisana-ity hazavana mivantana LED ity dia azo ampiasaina mandritra ny 3 taona. Raha mila fanampiana ianao dia andefaso mailaka izahay, ny ekipa matihanina aorian'ny varotra dia hamaha ny olanao ara-potoana ary hanome anao vahaolana mahafa-po 100%
Teo aloha: RCL-911 Fitaovana hazavana LED ambany nitaingina ambany
Manaraka: RCL-2518 hazavana tariby LED eo alohan'izay